November 5, 2021 - Celegroup
စီးပြားေရးလုပ္တဲ့အခါ မုဆိုးတစ္ဦးလို က်င့္ႀကံပါ
November 5, 2021 Celegroup1975 0
စီးပြားေရးလုပ္တဲ့အခါ မုဆိုးတစ္ဦးလို က်င့္ႀကံပါ တစ္ခါက စီးပြားေရးလုပ္ရတာအဆင္မေျပလို႔ စိတ္ညစ္ေနတဲ့ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ထိုစိတ္ညစ္မႈေတြကို ေျဖေျဖာက္ဖို႔ သူ႔အိမ္ရဲ႕ မနီးမေဝးမွာရွိတဲ့ ေတာအုပ္ေလးနားက စမ္းေခ်ာင္းေလးေဘးမွာ ေအးေအးေဆးေဆး စိတ္ေျဖရင္း နည္းလမ္းသစ္ေတြကို စဥ္းစားေနခဲ့တယ္။ အဲ့လိုေန႔စဥ္ ထိုင္စဥ္းစားေနခဲ့တဲ့ ေန႔ရက္တိုင္းမွာ သူ႔နံေဘးကေန မုဆိုးႀကီးတစ္ဦးက ေတာေကာင္ေတြ တစ္ေန႔တစ္မ်ိဳး ရ,ရလာကာ ျဖတ္သြားေလ့ရွိတာကို သတိထားမိတယ္။ဒါနဲ႔တစ္ရက္ေတာ့ ဗဟုသုတလည္းရေအာင္ဆိုကာ မုဆိုးႀကီးကို သားေကာင္ေတြ တစ္ေန႔တစ္မ်ိဳး ဘယ္လိုရေအာင္လုပ္လဲ ေမးၾကည့္ခဲ့တယ္။ မုဆိုးႀကီးကလည္း အသက္ဝါႀကီးသူဆိုေတာ့ ‌လူ႔ေလာကရဲ႕ […]
ဖုန်းသုံးတဲ့အခါ လူတိုင်း လုပ်မိတတ်တဲ့ မကောင်းတဲ့ အမှား (၅)ခု ဖုန်းတွေဟာ လူတွေနဲ့ အမြဲတမ်းအတူရှိတဲ့ အဖော်တစ်ယောက်လို ဖြစ်နေပါပြီ။ လူအချင်းချင်းတောင်မှ လူကောင်းလူဆိုး ခွဲခြားပေါင်းရသေးတာပဲ။ ဒီတော့ ၂၄ နာရီနီးပါး အနားအမြဲရှိနေတဲ့ ဖုန်းရဲ့ ကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့အချက်လေးတွေကို မှတ်သားထားပြီး ကိုယ့်အတွက်မကောင်းတဲ့ အချက်တွေကို မလုပ်မိစေဖို့ သတိထားဆင်ခြင်ကြရအောင်နော် (၁) ဖုန်းနဲ့အတူအိပ်ခြင်း=ဖုန်းဆိုတာဟာ အခြေခံအားဖြင့် လျှပ်စီးသံလိုက်စက်ကွင်းတွေကို ကူးပြောင်းပေးတဲ့၊ လက်ခံပေးတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ဖုန်းကနေ […]
ရွှေအတုအစစ် အလွယ်ခွဲခြားနည်း (၄)မျိုး ရွှေကိုအတုလားအစစ်လားဆိုတာအမြင်နဲ့အလွယ်တကူ ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး ဗဟုသုတရစေရန်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်..။ သံလိုက်ကိုအသုံးပြုစမ်းသပ်ခြင်း – သံလိုက်ကိုအသုံးပြုပြီးစမ်းသပ်တဲ့အခါရွှေအစစ်ဆိုရင် သံလိုက်နဲ့ ကပ်ပါလာခြင်းမျိုးမရှိဘဲ ရွှေအတုဆိုရင် သတ္တုပါဝင်တဲ့အတွက် သံလိုက်နဲ့ ကပ်ပါလာတာကို ကြည့်ပြီး ခွဲခြားပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေကိုအသုံးပြုစမ်းသပ်ခြင်း – ရေဖြည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်ထဲသို့ ရွှေကိုနစ်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါစစ်မှန်တဲ့ရွှေဟာ သိပ်သည်းဆများတဲ့သတ္တုဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ရေထဲသို့ချက်ခြင်း နစ်မြုပ်သွားတာတွေ့ရမှာပါ ရေပေါ်ပေါလောပေါ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ရွှေအစစ်မဟုတ်ကြောင်း သိရှိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုသတိထားရမှာကတော့သိပ်သည်းဆများတဲ့ သတ္တုကို အသုံးပြုထားမယ်ဆိုရင်တော့နစ်မြုပ်သွားနိုင်တာမို့ရေကိုအသုံးပြုစမ်းသပ်တဲ့အခါအထူးသတိပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်ရှင့်..။ ရှာလကာရည်ကိုအသုံးပြုစမ်းသပ်ခြင်း – မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ […]
အသိဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး ယုံကြည်ဖို့တော့ လိုပါတယ် မိကျောင်းထီးတစ်ကောင်ဟာ အမြဲတမ်း အစာရှာထွက်လေ့ရှိပြီး သူအစာရှာထွက်တဲ့မြစ်ကမ်းနားက ရေသဖန်းပင်ပေါ်မှာ မျောက်တစ်ကောင် နဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်နေကြပါသတဲ့။ မျောက်ဟာ အစာရှာပြီး မြစ်ကမ်းနားမှာ အနားယူလေ့ရှိတဲ့မိကျောင်းကို သူနေထိုင်ရာ သဖန်းပင်ပေါ်က သဖန်းသီးတွေကို မိကျောင်းအတွက်ခူးပြီးခြွေချပေးလေ့ရှိပါတယ်။ မျောက်ခြွေချပေးတဲ့သဖန်းသီးတွေကို မိကျောင်းက ကျောပေါ်တင်သွားပြီး သူ့ရဲ့မယားဖြစ်သူ မိကျောင်းမကို ကျွေးလေ့ရှိပါတယ်။ မိကျောင်းမဟာ သဖန်းသီးတွေကို စားတိုင်း ချိုလိုက်တာ…ဆိုပြီး အမြဲချီး ကျူးလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ မိကျောင်းမဟာ မိကျောင်းထီးကိုပြောပါတယ်။ “ […]
သင့်ဘဝအတွက် ဒါလေးတွေတော့ မှတ်သားထားပါ
သင့်ဘဝအတွက် ဒါလေးတွေတော့ မှတ်သားထားပါ ကြက်ကလေးက ကြက်အမေကြီးကိုမေးတယ်၊ မေမေ .. ဒီနေ့ ဥမဥလို့ရလား.. သားတို့အပြင်ထွက်လျှောက်လည်ကြမယ်လေ.. ´ ကြက်မကြီးကမရဘူးသား၊ မေမေ့အလုပ်ရှိသေးတယ်´ဒါပေမယ့် မေမေ အများကြီးဥခဲ့ပြီးပြီလေ ´ လို့ ကြက်ကလေးက ပြန်ပြောတယ်။ ကြက်မကြီးက လေးလေးနက်နက် အသံနဲ့ ကြက်ကလေးကို ပြန်ပြောတယ်.. အမေ တစ်နေ့ဥတစ်လုံးဥမှ လယ်သမားကြီးရဲ့ဟင်းခွက်ထဲ မရောက်မှာ.. ကလေး.မင်းမှတ်ထား.. အ သက်ရှင်ရပ်တည်မှုဆိုတာ ဖန်တီးထုတ်လုပ်မှုရဲ့တန်ဖိုး၊ သေဆုံးမှုဆိုတာ အဲဒီတန်ဖိုးမဲ့သွားလို့၊ အရင်ကလုပ်ခဲ့သမျှက […]
လူတစ်ယောက်ကို ဆွဲဆောင်တဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက် ကိုယ်ဟန် အမူအရာဟာ လူတစ်ယောက်ကို ဆွဲဆောင်တဲ့ နေရာမှာ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ အရာပါ ။ ချစ်ရေးချစ်ရာ ကိစ္စတွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူမှုဆက်ဆံရေး မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဟန် အမူအရာဟာ သိပ် အရေးကြီးပါတယ် ။ များသော အားဖြင့် လူတွေက Relationship တစ်ခု စတင်တော့မယ် ဆိုရင် ” ငါတို့ နှစ်ယောက် ဆက်ဆံရေး ဘာလို့ အဆင်မပြေတာလဲ […]
” တန်ဖိုးထားပါ လိုသုံးမလုပ်ပါနဲ့ “
” တန်ဖိုးထားပါ လိုသုံးမလုပ်ပါနဲ့ “ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူကိုလဲ ဘယ်တော့မှထားမသွားနဲ့ စစ်မှန်တဲ့အချစ်တွေနဲ့ ဝေးတတ်တယ် — ကိုယ့်ကိုမချစ်တဲ့သူနဲ့လဲ ဘယ်တော့မှ အောင့်အီးလက်တွဲပြီး ရှေ့မဆက်နဲ့ နာကျင်ရတယ် — တခဏတာလေး သာယာပျော်ရွှင်ဖို့ အတွက်နဲ့တစ်ဘဝတာလုံး ဆုံးရှုံးနစ်နာရမယ့် လုပ်ရက်မျိုးကိုလဲဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ ဘဝမလှမပဖြစ်ပြီးဒုက္ခနဲ့ အဆုံးသက်ရတတ်တယ် — မကောင်းမှုက လုပ်တော့သာကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ နောက်ဆက်တွဲက မိဘဆွေမျိုး အသိုင်းဝိုင်းတွေပါထိခိုက်လို့နစ်နာ အရှက်လဲရ သိက္ခာလဲကျတယ် — ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်တတ်တဲ့ သူနဲ့လဲဘယ်တော့မှ အပေါင်းသင်းမလုပ်ပါနဲ့ […]
နှာရည်ကျ၊နှပ်တရှုံ့ရှုံ့ဖြစ်နေခဲ့လျှင် ဆားငွေ့ရှူနည်း…. တစ်ဆောင်းတွင်းလုံးနှာစေးနေခဲ့ရင်။ လူရှေ့သူရှေ့မရှောင်နှာရည်ကျ၊နှပ်တရှုံ့ရှုံ့ဖြစ်နေခဲ့ရင်အလွယ်တကူစနဲ့၊ သက်သာစေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ဆားငွေ့ရှူတဲ့နည်းပါဘဲ။ ငွေမကုန်ပဲသက်သာစေမဲ့ မီးဖိုချောင်ကဆေးနည်းလေးပါ။ ပြုလုပ်ပုံကတော့ ဟင်းရည်သောက်ကြွေပန်းကန်လုံးထဲမှာပရုပ်ဆီအနည်းငယ်သုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ဆား၊ဟင်းစားဇွန်းနဲ့၃ဇွန်းထည့်ပါ။ ဆူပြီးသားရေနွေးသို့မဟုတ်ဓာတ်ဘူးထဲကရေနွေးပူပူလောင်းထည့်ပါ။ တက်လာတဲ့ ဆားအငွေ့ကို ဦးခေါင်းမှာတဘက်ပုဝါတစ်ထည်ခြုံပြီးကြွေပန်းကန်ထဲကတက်လာတဲ့အငွေ့ကိုရှူပေးပါ။ သေချာအငွေ့နှာခေါင်းထဲရောက်အောင်ရှူပေးပါ ပင်လယ်ထဲကဆားငွေ့လေရှူ သလိုမျိုးအကျိုးခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဆားငွေ့ဟာအဆုတ်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေပါတယ်။ နှာစေးတဲ့အရည်ထွက်ကျခြင်းကိုလည်းထိန်းစေပါတယ်။ လေရှူပြွန်ရောင်ခြင်းကိုလည်းသက်သာစေတဲ့အပြင်ပိုးများကပ်တွယ်ပေါက်ဖွားခြင်းမှလည်းဟန့်တားကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျနည်းပြီးဆေးရုံဆေးခန်းသွားစရာမလိုဘဲဒီနည်းကိုနေ့စဉ်မှန်မှန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်အဆုတ်အအေးပတ်နှာစေး။ ထိပ်ကပ်နာဖြစ်ခြင်များမှကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ လေဖြတ်ပြီးအိပ်ယာထဲလှဲနေရတဲ့မိဘများကိုလည်း ဒီနည်းဖြင့်၊ ဆားငွေ့ရှူပေးခြင်းဖြင့် အဆုပ်ပွ၊ ချွဲဆိုက်ခြင်းဘေးမှကာကွယ်စေနိုင်ပါတယ်။ လေဖြတ်သူများကိုအင်္ဂလိပ်ဆေးတိုက်ရုံနဲ့ပစ်မထားကြပါနဲ့။ သူတို့အဆုတ်မပွအောင်ဂရုစိုက်ကြပါ။ ဆားငွေ့ရှူပေးပါ၊ မနက်နေရောင်ခြည်လည်းပြပေးပါ။ ကြည်လွင်မြင့်(မုဒြာ) နှာရည်ကျ၊နှပ်တရှုံ့ရှုံ့ဖြစ်နေခဲ့လျှင်…… ဆားငွေ့ရှူနည်း…. တစ်ဆောင်းတွင်းလုံးနှာစေးနေခဲ့ရင်။ […]
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက မြို့တစ်မြို့မှာ ကြက်တူရွေးချစ်တတ်တဲ့ ပုဏ္ဏားကြီးတစ်ယောက် ရှိတယ်.သူ့ဆီမှာအင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းပြီး စ ကား အလွန်တတ်တဲ့ ကြက်တူရွေးလေး နှစ်ကောင်ရှိသတဲ့. ပုဏ္ဏားကြီးဟာ ကြက်တူရွေးလေး ၂ကောင်ကို အင်မတန်မှချစ်မြတ်နိုးတာကြောင့် သားသမီးအရင်းပမာဆက်ဆံတယ် .တနေ့တော့ပုဏ္ဏားကြီးဟာအခြားမြို့တစ်မြို့ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ညအိပ် ခရီးထွက်ဖို့ အကြောင်းပေါ်လာတယ် ပုဏ္ဏားကြီးဟာ ခရီးထွက်ခါနီးမှာ ကြက်တူရွေး ညီနောင်ကို ပုဏ္ဏားမကြီး အားစောင့်ကြည့်ဖို့ မှာကြားခဲ့တယ်။အဲလိုနဲ့ ပုဏ္ဏားကြီးခရီးထွက်သွားပြီးမကြာခင်မှာ ပုဏ္ဏားမကြီးဟာ သူ့ရဲ့ လင်ငယ်နဲ့ဖောက်ပြန်ပါတော့ တယ် ဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့ကြက်တူရွေးညီနောင်ထဲမှ အ ငယ်ကောင်က […]
မိကျောင်းထီးတစ်ကောင်ဟာ အမြဲတမ်း အစာရှာထွက်လေ့ရှိပြီး သူအစာရှာထွက်တဲ့မြစ်ကမ်းနားက ရေသဖန်းပင်ပေါ်မှာ မျောက်တစ်ကောင် နဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်နေကြပါသတဲ့။ မျောက်ဟာ အစာရှာပြီး မြစ်ကမ်းနားမှာ အနားယူလေ့ရှိတဲ့မိကျောင်းကို သူနေထိုင်ရာ သဖန်းပင်ပေါ်က သဖန်းသီးတွေကို မိကျောင်းအတွက်ခူးပြီးခြွေချပေးလေ့ရှိပါတယ်။ မျောက်ခြွေချပေးတဲ့သဖန်းသီးတွေကို မိကျောင်းက ကျောပေါ်တင်သွားပြီး သူ့ရဲ့မယားဖြစ်သူ မိကျောင်းမကို ကျွေးလေ့ရှိပါတယ်။ မိကျောင်းမဟာ သဖန်းသီးတွေကို စားတိုင်း ချိုလိုက်တာ…ဆိုပြီး အမြဲချီး ကျူးလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ မိကျောင်းမဟာ မိကျောင်းထီးကိုပြောပါတယ်။ “ ရှင်ယူလာတဲ့သဖန်းသီးတွေက ချိုလိုက်တာနော်….ဒါပေ မယ့် […]
သားမိုက် ရဲ့အိမ်ပြန်ချိန် (အရမ်းကောင်းတဲ့ စာလေးပါ) ဧည့်ကြိုဌာနရှေ့တွင် အဘိုးအို တစ်ယောက်က လာရပ်လိုက်ပြီး “မစ္စတာ တာနာကာနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါ” ဟုပြောလိုက်သည်။ “မစ္စတာ တာနာကာနဲ့ ဘယ်လို ပတ်သက်ပါသလဲ။ ကြိုတင်တွေ့ခွင့်တောင်းထားပါသလား” “ဦးက မစ္စတာ တာနာကာရဲ့ အဖေပါ” “သြော် … ခေတ္တစောင့်ပါရှင်။ ဆက်သွယ်ကြည့်ပါ့မယ်” ဧည့်ခန်းကြီး က ကြီးကျယ်လှသည်။ လူတွေကလည်း ဝင်ထွက်သွားလာ။ ကုမ္ပဏီကြီးကလည်း အကြီးကြီးဖြစ် နေသဖြင့် ပီတိတွေဖြစ်နေသည်။ ဘေးမှ သူ့လို […]
” သင်စိတ်ညစ်တဲ့အခါ ဒီစာလေးကိုဖတ်ပါ ”
မာနတွေ သိပ်မထားပါနဲ့ မထားသင့်တဲ့ မာန်မာနကသင့်ကမ္ဘာကို ကျဉ်းမြောင်းစေပါတယ်။ လူတွေကိုအပြုံးနဲ့ စတင်နှုတ်ဆက်ဖို့ဘယ်တော့မှ ဝန်မလေးပါနဲ့။ အပြုံးတွေက တစ်ဖက်လူကို ပျော်ရွှင်စေသလိုကိုယ်တိုင်လည်း ပီတိ ဖြစ်စေတယ်။ လူတိုင်းမှာ ဝမ်းနည်းစရာဆိုတာအမြဲရှိပြီးသားပါ သင်တစ်ယောက်တည်းမပျော်ရွှင်ပဲ ဝမ်းနည်းနေရတာ မဟုတ်ဘူး။ဘဝဆိုတာ ဒင်္ဂါပြား တစ်ခုလိုပဲမျက်နှာပြင်နှစ်ဖက် ခေါင်းနဲ့ ပန်းလိုပါပဲအဆိုးတွေပြီးရင် အကောင်းဆုံးတွေတစ်ကျော့ပြန်လှည့်လာမှာပါ။ ဖြေရှင်းလို့ရတာတွေ ဆက်ဖြေရှင်းပါ။ဖြေရှင်းလို့မရတာတွေ ပစ်သာထားလိုက်ပါ အချိန်တစ်ခုကြာတော့လည်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ သင်ကံကြမ္မာတစ်ခါပြန်ကံကောင်းလာမှာပါ။ အရေးကြီးတာကဘယ်အရာတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့စိတ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ချင်စိတ်လေးရှိဖို့ပဲ လိုတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီက မျှော်လင့်ချက်တွေထင်သလို ဖြစ်မလာတဲ့ အခါမျှော်လင့်ချက်တွေကို […]